Rabekijana Félix : « Tsy misoratra amin’ny fifidianana ny vehivavy any atsimo » – Vaovao Madagasikara
« Misy olana ngezabe ny vehivavy any amin’ny tapany atsimon’i Madagasikara: tsy misoratra amin’ny lisi-pifidianana, satria misy ny fomban-teny hoe tsy entim-behivavy ny fanjakana. » Io ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix, teny Alarobia, omaly, tamin’ny atrikasa momba ny teti-pirenena fitaizana sy ny fanentanana ny mpifidy eto Madagasikara.
Tamin’ny alalan’ny fanadihadiana ifotony no nahalalan’ny KMF/Cnoe amin’ny antsipiriany izany. Any amin’ny faritra avaratra indray, tsy mandray andraikitra sy anjara misoratra ao anatin’ny lisitry ny mpifidy ny tanora.
8,6 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana amin’izao fotoana izao. Nefa tokony ho 10 tapitrisa mahery izany, raha mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy.
Misy asa tsy maintsy atao ifotony
« Misy asa tsy maintsy atao ifotony izany hahazoan’ny tanora misoratra ao amin’ny lisitry ny mpifidy », hoy izy. Any amin’ny tapany atsimo, tsy ravana ny fomban-tany hoe tsy entim-behivavy ny fanjakana, fa entanina ho tomponandraikitra tanteraka eo amin’ny raharaham-pifidianana ny vehivavy.
Paikady karohina amin’ny atrikasa àry ny hoe: ahoana no hahatonga ny vehivavy handray anjara mavitrika amin’ny fifidianana? Amin’ny ankapobeny, maro anisa ny vehivavy eto Madagasikara. Raha tsy mandray andraikitra amin’ny fampandrosoana izy ireo, tsy handroso ny firenena.
Miantraika amin’ny fampandrosoana ny lisi-pifidianana tsy tomombana
Raha vao tsy miara-miasa ny olona mpikarakara fifidianana sy ny fokontany, tsy hisy lisitry ny mpifidy ho vanona. Tsy maintsy mandringa ny asan’ireo, raha vao tsy ampy ny vola amin’izany. Raha vao mandringa izay, alasafay ny lisitry ny mifidy: ho be ny olona tsy hifidy. Misy fiantraikany ngezabe eo amin’ny fampandrosoana ny firenena izay.
« Mba tsy ho fifidianana fahoany fahoany no hatao eto Madagasikara », hoy ihany izy. Ny zava-doza, tsy ny mpifidy nanao fifidianana fahoany fahoany ihany no hiantraikan’izay, fa mizaka ny fahavoazana ny rehetra. Ilaina ny fitaizana amin’ny fifidianana. Ny adihevitra izao: ahoana no hanarenana izay eny anivon’ny fokontany hatrany amin’ny vahoaka madinika? Ho fampahafantarana azy ireo fa misy lanjany ny fifidianana sy ny vato arotsany. Mba ho fifidianana tompondraikitra no atao.